Top 20 iPhone sy ny iPad Apps sy lalao amin'ny volana - News Fitsipika
Top 20 iPhone sy ny iPad Apps sy lalao amin'ny volana
Doctor Iza: tantara an-tsary Mpamorona, Dragon na aiza na aiza, Great Italiana chefs, Super Arc Light, Total Ady Ady: Fanjakana sy ny maro hafa mba miezaka eo amin'ny iOS fitaovana
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Top 20 iPhone sy ny iPad Apps sy lalao amin'ny volana” dia nosoratan'i Stuart Dredge, fa theguardian.com ny zoma 1 Aprily 2016 07.00 UTC
Avy Doctor Iza amin'ny teny italiana chefs, ary tafavoaka velona Korea Atsimo-horohoro ho very ba kiraro - ny App Store dia malalaka tokoa ny fiangonana ao amin'ny 2016.
Ny pick ny tsara indrindra fampiharana vaovao sy ny lalao tamin'ity volana ity dia ahitana rehetra ny etsy ambony, miampy mozika fanaovana fitaovana, Retro lavaka Adventures, ary ny fampiharana izay ankizy laharana teo amin'ny fahaizany mandika sarimiaina tarehin-tsoratra 'gurning.
Vidin-javatra rehetra dia marina tamin'ny fotoana nanoratana, ary raha mahita "IAP" dia midika hoe ny fampiharana na lalao mampiasa in-App fividianana. Mitady Android fampiharana? Misy misaraka fantina isam-bolana ho an 'ireo.
Doctor Iza: tantara an-tsary Mpamorona.
Doctor Iza: tantara an-tsary Mpamorona (Free + IAP)
Mikendry ny ankizy, Whovian na dia ray aman-dreny dia manana be dia be ny mahafinaritra izany koa. Ity App BBC mahazo anao famoronana Comics nomerika isan-karazany starring Doctors, namany sy ny vahiny, amin'ny tsotra interface tsara sy ny biby goavam-be mix'n'match famoronana fitaovana. Fun famoronana milalao ho an'ny ankizy (ny sokajin-taona rehetra).
Nintendo ofisialy voalohan'ny fampiharana finday eto, na dia ny tsy ny lalao sy ny maro hafa iray Avatar-monina fampiharana ara-tsosialy - mifantoka amin'ny tarehin-tsoratra ny mahazatra Mii. Mamorona Mii, ka hanatitra azy ho toy ny "ara-tsosialy-handeha eo" ny namana amin'ny Quizzes, mini-lalao sy ny sary-fanovana naorina. Quirky fa mahaliana.
Dragon na aiza na aiza (Free)
Vao hita ao amin'ny UK, izany no Nuance ny vavan'i fampiharana izay mivadika ny antontan-taratasy teny ho voatahiry ao amin'ny orinasa ny lohamilina, mba hahafahanao miditra azy ireo amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny fampiharana miasa tsara - na ianao no mila ny £ 14.99-a-volana "Dragon na aiza na aiza" famandrihana hampiasa azy io araka ny herinandro voalohany.
Sky Kids (Free + famandrihana)
Izany no vaovao Sky fampiharana ho an'ny ankizy ao amin'ny UK, miara-mitondra mampiseho amin'ny ankizy 'fantsona avy Sariitatra Network ny CBeebies, miaraka amin'ny teny fikasana ny mampiseho manokana (Anisan'ny fizarana Morph vaovao) tatỳ aoriana isan-kerintaona. Ny hoavy vaovao dia afaka ihany koa ny ray aman-dreny mba hametraka fijerena-potoana fetra.
Raha manana fianakaviana amin'ny Alzheimer, io fampiharana no tsara mendrika nanamarina avy. Tena ampahany ny fitrandrahana fampiharana, mba hitandrina ny firaketana ny fahatsiarovana sy ny asa isan'andro. Azonao atao koa ny mampiasa azy io mba hahazo ny farany Alzheimer's-mifandray vaovao, na ny hiresaka amin'ny Javoo ny ekipa ny carers rehefa mila knowledgable mpivady ny sofina.
Zavatra Lehibe chefs - Recipes (Free)
Startup Lehibe British chefs Namoaka Apps mampiseho fomba fanamboarana ny, Eny, British lehibe chefs. Izany dia midika hoe mitodika ankehitriny ny sainy ho Italianina. izany tolotra 118 fomba fanamboarana avy 26 chefs, avy amin'ny Hanombohana ny tsindrin-tsakafo. Ny torolalana dia mazava sy mora ny hanaraka, ary misy mora raisina fiantsenana-lisitra endri-javatra noho ny mahazo sakafo.
Developer Liine dia nanao mozika fitaovana nampiasain'ny Daft Punk sy Björk amin'ny mpanakanto hafa, fa ny fampiharana iPad vaovao ho an'ny olona. Tena misy idirana, fampiharana ny famoronana mahafinaritra elektronika mozika, izay mahatonga azy mora hanampatra ny hatezerany miara-mitempo sy ny hira rehefa manana fotoana nanam, Dia hanoratra sy hizara azy ireo amin'ny hafa.
Dashcams no hahazo malaza tato anatin'ny taona, firaketana ny lahatsary ny lalana mialoha rehefa nitondra fiara handeha, ho porofo ny loza (na mianjera meteors). Nexar dia feno hafetsena mamadika ny hevitra ho an'ny iPhone ho dashcam, na mahafantatra fa ny zavatra rehetra dia mirakitra an-tsoratra dia nampakatra ny orinasa lohamilina.
Ity hevitra mahaliana: chatbot-monina ny fampiharana izay te-hanampy anao amin'ny fanompoana ny mpanjifa-fitarainana. Ny hevitra satria milaza izy fa ny zavatra tsy nety ianao rehefa mifampiraharaha amin'ny orinasa manokana - avy Travel hassles sy ny fiterahana tara ny zavamisy vokatra - Ary mitantam ny fitarainana dingana ho anao. Ny fifantohana eo amin'ny UK, Etazonia sy Kanada, na dia ny misy maneran-tany.
MuvaMoji amin'ny Amber Rose (£ 1,49)
Model Amber Rose nanao ny lohateny lehibe vao haingana noho ny fanambarana momba ny mpiara-miasa teo aloha Kanye West. Ary izy mitranga loha-to-lohany sy ny vadiny Kim Kardashian amin'ny fivarotana ny fampiharana miaraka amin'ny fampiharana emoji. MuvaMoji dia ahitana an-jatony ampiasaina ao amin'ny hafatra, ao anatin'izany - Tonga soa eto dingana iray - feno fizarana ny LGBT-nanana lohahevitra emoji.
No voalaza fa "Super Hexagon nihaona Geometry Wars", dia tokony hanome na iza na iza mahafantatra ny finday lalao ny tsipiriany io, izany dia afaka ny ho tena sarotra. Izany no mahatonga azy ho sarotra ho an'ny mpankafy mahafa-po ny minimalist tsimoka 'en dehibe anefa: izany no twitch ny lalao amin'ny finday tsara indrindra amin'ny fitaovana.
Lost ba kiraro: maditra rahalahy (£ 3.99)
Mety very ba kiraro mba mitsoka toy ny foto-kevitra nanentana ny fanahy indrindra ho an'ny lalao, Very ba kiraro fa dia tena Fifaliana. Manana fomba mahatalanjona sariitatra sary sy ny sarimiaina, ary 30 inventive haavon'ny mihazakazaka, hitsambikina ary very hevitra ny lalana amin'ny alalan'ny. Tsy mety ho sarotra, fa tsy lasa hahakivy loatra.
Inona no ao ny andro ho velona ianao raha mpankafy ny finday remakes ny Koreana Tatsimo tafavoaka velona-horohoro PC lalao avy 2001! Fa hitazona izany Snark, satria White Day dia tsara mamelombelona mendrika. Tena tena-mampatahotra traikefa nahafinaritra namponeniny tany an-up iray voahidy lise, miaraka amin'ny fanindriana ny tahotro fa tsy Góry famonoana.
Total Ady Ady: Fanjakana (Free + IAP)
Key fampiasana ny finday avo lenta amin'ny 2016: tambajotra sosialy, mivantana mozika, fitaizan-tafika mba handresy izao tontolo izao raha fananganana fanjakana tànana hafa kely indray an-trano… Total Ady Ady: Fanjakana mijery tsara koa ny miaramila-tetika Genre, amin'ny mitroka gameplay sy ny fahafahana hilalao amin'ny PC ary koa ny fitaovana finday.
Legacy Fitadiavana (Free + IAP)
"Angony cubelets sy ny asa tanana Epic, biby goavam-be-namono fitaovam-piadiana sy ny fitaovana,"Manazava ny App Store mitanisa ny Nexon ny RPG, izay vao lasa manerantany. Raha toa Minecraft… tsara, misy fitoviana, fa izao no bebe kokoa ny asa nentim-paharazana-RPG lalao ao am-pony, amin'ny crafting manampy ny milamina fanampiny mikasika.
Mihaza isika wabbits, Eto! Ihany anefa no hamonjy azy. Izany no tsara namolavola tamin-kafetsena action-puzzler amin'ny lafiny nasty - ny fahafatesana mampalahelo ny lava sofina mahery fo lavo dia afaka niharam-boina ho. Ny fanaraha-maso dia tsotra swipes, fa ny tena tsara dia tena anivon'ny endrika hitsapa ny wits. An indie mahazatra.
Faily freins (Free + IAP)
Faily freins Mety ho toa toy ny efatra-naterak'ireo kodiarantsika Crossy Road rip-eny, fa soa ihany fa mahaliana kokoa - ary mahafinaritra - noho izany. Jerena avy ao aoriana ny fiara, ny lalao mahita anao careering midina an-tendrombohitra dodging toerana manodidina, fanangonana vola madinika, ary gaga ny miadana-sarimihetsika replays rehefa mianjera.
Gigglebug ny Face Foko (Free)
Farany, zavatra mahafinaritra: Gigglebug ny Face Foko dia mamirapiratra fampiharana ho an'ny ankizy izay ry zareo aseho amin'ny sariitatra mampihomehy toetra mitarika tarehy, ary tsy maintsy mifanaraka azy ireo - babo ny fitaovana anoloan'ny-miatrika ny fakan-tsary, ary nomena kintana naoty. Ankizy ho tia azy, ary izy ireo ihany koa ray aman-dreny milalao miaraka manantitrantitra.
Trano-maizina Biby Goavam RPG (Free + IAP)
Nisy fipoahana avy amin'ny lalao taloha. Biby Goavam trano-maizina dia voalohany singiolary ny trano-maizina crawler, izay hanome ny iray mpilalao flashbacks taona ny trano-maizina Master, Ny Bard ny Tale sy ny hafa karazana Classics. Tsy tanteraka fa izao no efa lany andro: ny sary mareva-doko sy mihazakaza-dava gameplay mahatsapa ankehitriny.
Raha efa nandray lalao amin'ny developer Kairosoft, ianao mahafantatra izay hitranga amin'ny Bonbon Cakery. Tena paikady lalao izay mihazakazaka ny MOFOMAMY, fampandrosoana ny fomba fanamboarana ny hanome fahafaham-po ny mpanjifa, raha fananganana ny raharaham-barotra sy ny miditra fifaninanana. A mahazatra raikipohy, fa tahaka doha toy ny teo aloha ny orinasa lalao.
Izany ny pick ny fampiharana ny vaovao fa ny App Store maintsy hanatitra volana ity, fa ho ampy inona no efa nankafy? Ny fanehoan-kevitra dia misokatra ho an'ny fizarana ny heviny momba ny fampiharana ambony, na ny tolo-kevitra ho an'ny fampiharana vaovao fa efa hita.
The Pirate Bay ny aterineto navigateur Hits millio iray ...
Star Wars: Ampandrenesiny ny Force Review
Life Hacks: Apps fa tsy tokony ho Witho ...
24753	10 Paoma, Apps, Article, Best iPhone sy iPad app, Ankizy Tech, Kolontsaina, Hafanàm-po an mozika sy ny feo, Doctor Iza, Toetoetra, Games, iPad, iPhone, Media, Finday, Smartphone, Stuart Dredge, Tablet ordinatera, Teknolojia
← Dyson nandefa Madio Cool Air Link hanadio Sivy mahakivy indrindra fahadisoana rehetra Video Game Players ho →